La taliyaha MW: “Ciidanka ka dagaalama Shabeelooyinka iyo Muqdisho waa ciidan Beeleed mushaarna Qaran ma laha”. - Muqdisho Online
Home Wararka La taliyaha MW: “Ciidanka ka dagaalama Shabeelooyinka iyo Muqdisho waa ciidan Beeleed...
La taliyaha MW: “Ciidanka ka dagaalama Shabeelooyinka iyo Muqdisho waa ciidan Beeleed mushaarna Qaran ma laha”.
La taliyaha xagga Amniga ee Madaxweyne Farmaajo, Cabdisaciid Muse Cali ayaa sheegay in sababta mushaarka loogu diiday ciidamada ka dagaalama degaanada labada Shabeele iyo Muqdishu ay yihiin ciidan ka soo jeeda hal beel.
Cabdisacid oo la hadlay talista ciidanka AMISOM ayaa ku goodiyay in hal beel ay ka kooban yihiin ciidamada la dagaala Shabaab ee ku sugan Muqdisho iyo nawaaxigeeda. Waxa uu yiri “Anagu ciidan hal beel ka soo jeeda ma u hayno mushaar, hadii aan haynana ma siin karno dhaqaale iyo taakulayn”. Taliye ku xigeenka AMISOM ayaa u sheegay Cabdisaciid, in ay muhiimadu tahay in dalka laga xureeyo AL Shabaab iyada oo dhamaan deeganada dalka ay ka dagaalamaan ciidan ka soo jeeda deegaanka ay ka dagaalamayaan.
Taliyaha ayaa ku daray “inta laga dhisayo ciidan Qaran waa in aan ka wada shaqeeynaa sidii aan AL Shabaab dalka looga xorayn lahaa”. Waxa uu intaa ku daray “waan soo dhaweyneynaa in aad keentid ciidan ka soo jeeda beesha aad ka dhalatay ee degta Puntland oo diyaar u ah in ay u dhintaan oo ay difaacaan Dowladda”.
Cabdisaciid oo ay ka muuqato caadifo qabiil ayaa yiri “ ma garaneysaa sababta loo kala diray ciidanka Nabadsugida Qaranka ee NISA waxa ay ahayd?….. waxa ay ka koobnaayeen hal beel oo kali ah, waxaana danta nagu kaliftay in ciidanka oo dhan kala dirno oo ciidan cusub dib loo soo aasaaso”.
Iyada oo ciidanka Xooga dalka ay habeen iyo maalin u dhimanayaan difaaca qaranka iyo dowlada ayaa Ra’iisal Wasaare waxa uu ku jiraa aargoosi qabiil isaga oo u arka ciidanka naftood hurrayaalka kuwa ka soo horjeedo danaha beeshiisa.
Nasiib xumo Cabdisaciid Muse oo aan tagi karo deegaanka uu ku dhashay iska daa in uu cidan ka keeno ayaa waxa uu colaad qabiil awgeed uu mushaar la’aan u dhigay ciidan habeen iyo maalin u soo jeeda difaaca dalka.
Previous articleWararkii ugu dambeeyay Ciidamo soo faarujiyay Furaha iyo Muqdisho oo cabsi laga dareemay!!
Next articleFaahfaahin: Macalin Dugsi oo Muqdisho lagu dilay